[Fampisehoana nofoanana] Vondrona manokana NORA | Fikambanana fampiroboroboana ny kolontsaina Ota Ward
[Fanafoanana ny fampisehoana]Fizarana manokana NORA
Shimomaruko JAZZ Club	[Fanafoanana ny fampisehoana]Fizarana manokana NORA
~ Tetikasa manokana an'ny Shimomaruko Citizen's Plaza izay nitohy hatramin'ny 1993 ~
Tonga eto ny "Ota Ward Latinization Plan Band" tarihin'i DIVA "NORA" avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao!
◆ Shimomaruko JAZZ Club <Mety> Fanamarihana ny fanafoanana ny singa manokana NORA * Nohavaozina tamin'ny 5/5
Mikasika ny zava-bitan'ny "Shimomaruko JAZZ Club <May> NORA Unitie Manokana" kasaina hatao ao amin'ny Ota Ward Plaza Hall Small amin'ny Alakamisy 5 Mey, mpanakanto iray no ho Coronavirus vaovao. Tsy azo ihodivirana ny fanafoanana ny zava-bita amin'ny fiheverana ny fiarovana sy fiarovana ny mpanjifanay, ny mpanakanto ary ny mpiasanay.
Diviziona fampiroboroboana ny kolotsaina sy ny zavakanto 03-3750-1555 (10: 19-XNUMX: XNUMX)
Alakamisy 2021 aprily 5
18:30 manomboka (18:00 misokatra)　18:00 manomboka (17:30 misokatra)
Daty famoahana: 2021 aprily 4 (alarobia) 14:10 -
Natokana daholo ny seza * Nofoanana ny fampisehoana
2,500 yen (vidin'ny Internet: 2,370 yen)
Fihenam-bidy tara [19:30 ~] 1,500 yen (raha misy toerana sisa amin'ny andro)
Ny fihenam-bidy an-tserasera dia hifarana amin'ny 2021 Mey 5 (Alarobia).
Mba hisorohana ny fihanaky ny aretina virus coronavirus vaovao dia natokana daholo ny seza, tsy mahazo misakafo sy misotro ary nosoloina tanteraka ny rafitra.
Mba hisorohana ny fihanaky ny aretina coronavirus vaovao dia mety hiova ny atin'ny fampisehoana toy ny fotoanan'ny fihazonana.
Antsipirian'ny Shimomaruko JAZZ Club